Coordinates: 15°20′N 38°56′E﻿ / ﻿15.333°N 38.933°E﻿ / 15.333; 38.933
Asmara waa caasimada dalka Ereteriya, waxaana degan dad gaaraayo ilaa 579000 oo qof. waxa ay kutaalaa meel bada kasaraysa 7628 mitir. Magaca asmara waxaa af tigri ahaan laga wadaa mideeya ama mid ka dhiga. Asmara (Tigrinya: ኣስመራ), oo loo yaqaan "Asmera" (macneheedu waa "jimicsi [dheddig-jimicsi] waxay isku mideeysan yihiin" Tigrinya), waa magaalada caasimada ah iyo magaalada ugu weyn ee Eritrea. Hoyga dadweynaha oo ka kooban dad ka badan 800,000 oo qof,  waxay fadhisaa kor u kac 2,325 mitir (7,628 ft), lixda caasimadood ee ugu sarraysa aduunka. Magaaladu waxay ku taallaa cirifka xudduudaha labada gobol ee waqooyi-galbeed ee Eritrea iyo Dooxada Great Rift Valley ee Itoobiya. Sanadkii 2017, magaalada waxaa lagu dhawaaqay inay tahay UNESCO Mashruuca Hiddaha Adduunka.  Asmara waxay ku taallaa gobolka Maekel ee bartamaha Eritrea. Waxaa loo yaqaanaa qaabdhismeedka casriga ah ee suugaanta talyaaniga.  Magaaladu waxay u qaybsan tahay toban iyo toban degmo oo kala duwan: Acria, Abbashaul, Edaga Hamus, Arbaete Asmara, Mai Temenai, Paradizo, Sembel, Godaif, Maekel Ketema ama Downtown, Tiravolo, Gejeret, Tsetserat iyo Gheza Banda.
Roma yareey - ፒኮላ ሮማ
Piccola Roma "Roma yereey"
• Duqa asmaro
• Gudoomiyaha Zoba
4,694.3 sq mi (12,158.1 km2)
7,628 ft (2,325 m)
138.3/sq mi (53.38/km2)
Asmara waxay bilowday inay si deg deg ah u korto markii uu ku sugnaa Talyaaniga 1889. Guddoomiye ku xigeen Ferdinando Martini wuxuu ka dhigay caasimadda Eritrea ee Italia 1897, doorbidayaan dekedda Badda Cas ee Massawa. Qarnigii 20aad, Tareenka Eritera waxaa loo dhisay xeebta, isaga oo u soo maraya magaalada Ghinda, oo hoos timaadda Carlo Cavanna. 1913 iyo 1915tii magaaladu waxay ku dhaawacmeen wax yar oo dhulgariir ballaaran.  Bulsho Talyaani ah oo wayn ayaa horumariyey. Sida laga soo xigtay tirakoobkii 1939, Asmara waxa ku nool dad tiradoodu ahayd 98,000, oo 53,000 ay ahaayeen Talyaani. 75,000 qof oo keliya ayaa ku noolaa dhammaan Ereteriya, oo ka dhigtay magaalada caasimadda ah xaruntooda ugu weyn.  (Isbarbardhig tani oo ku saabsan gumeysiga Talyaaniga ee Liibiya, halkaas oo dadka degan degaanka, inkastoo ay sii ballaadheen, in ka badan kala firdhiyey.)
Fiat Tagliero station Caasimada waxay heshay muuqaal naqshad talyaani ah. Dadka reer Yurub waxay u isticmaaleen Asmara "si ay u tijaabiyaan naqshado cusub oo xagjir ah".  Markii la gaadhay 1930kii, Asmara waxaa loo yaqaan 'Piccola Roma' (Little Rome).  Maanta dhismayaal badan ayaa ka yimid asal ahaan talyaaniga, dukaamada ayaa weli leh magacyo Talyaani ah (tusaale, Bar Vittoria, Pasticceria moderna, Casa del formaggio, iyo Ferramenta).
waxaa lasheegay in qarnigii afraad in goobta magaalda Asmara kutaalaa ay ahayd meel dagaal iyo muran badani uu kataagnaa ilaa ay usuurto gashay afar dumari in ay nabad kasameeyaan oo ay heshiisiiyaan dadkii goobtaad daganaa sidaas ayaa loogu bixiyay magaca Asmara oo macnihiisu yahay (midaysay) ama heshiisiisy
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Asmara&oldid=182675"
Last edited on 15 Oktoobar 2018, at 09:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2018, marka ee eheed 09:39.